Xisbiga Waddani oo Dhaliilay Xukuumadda Somaliland. | Hargeysa World~Herald
Xisbiga Waddani oo Dhaliilay Xukuumadda Somaliland.
UncategorizedXisbiga Waddani oo Dhaliilay Xukuumadda Somaliland.
“ Lacagaha ay hay’adduhu siiyaan Somaliland waxay ku shubaan Baanka kadibna wasiirradu iyada oo Doollar ah bay ka qaadaan oo isticmaalan… Waxa dhacda in wasiirradu saxeexaan sagaal boqol oo kun oo dollar oo jeebab dad ku dhacda cidna aanay xisaabin marka la saxeexo kadib…
Maamul xumada xukumadda Kulmiye waxa ka mid ah in ay xilligan xoolaynayaan dad xoolihii abaartu ka saartay. Qof xoolihii yaraa ee uu hayay aan biyo iyo baad toona u hayn marka hadda xoolo kale la siiyo sidee buu odhanaya..”
Xoghayaha Xanaanada Xoolaha Xisbiga WADDANI Dr Axmed-shukri.